सचेत रहनुहोस, कतै तपाईंको नाममा कसैले प्यान दर्ता त गराएको छैन ? (सूचना सहित)
बजारमा मजदुर वा कम्पनीसँग असम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा प्यान दर्ता गरेर कारोबार गर्नेहरु भेटिन थालेका छन् । यस्तो कारोबार भेटिएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले गुणस्तरीय दर्ता (Quality Registration) मा जोड दिँदै सचेत हुन आग्रह गरेको छ ।
कतिपय व्यवसायीले रोजगारी खोज्दै आउने मजदुरहरुलाई प्रयोग गरी तिनैको नाउँमा प्यान दर्ता गर्ने र कर दायित्वबाट पन्छिने कोशिस गरेका उदाहरण भेटिएका हुन् । यसप्रति सजग गराउँदै विभागले गुणस्तरीय दर्ताको अवधारणा अघि सारेको जनाएको छ । 'कारोबारमा संलग्न व्यक्ति र निकाय दर्ता नभई कामदार वा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिका नाममा कारोबार दर्ता गरी करको दायित्व अन्य व्यक्तिलाई सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति देखिने गरेको' विभागद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
विभागले 'वास्तविक रुपमा कारोबारमा संलग्न व्यक्तिका नाममा मात्र फर्म वा कम्पनी दर्ता भई आफ्नो कारोबारको सूनिश्चितता गरी दर्ता गर्न, गराउन' आग्रह गरेको छ । साथै गुणस्तरीय दर्तामा ध्यान दिर्इ वास्तविक करदाता एकिन गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालयहरुलाई निर्देशन समेत दिईएको छ ।
रोजगारीको सिलसिलामा जुनसुकै किसिमको सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले करको दीर्घकालीन दायित्व नै आफुमाथि आइलाग्न सक्दछ । यसतर्फ समयमै सचेत हुनु जरुरी छ । कतिपय करदाताले अज्ञानतावश रोजगारी दिने कम्पनीको प्यान दर्ता आफ्नो नाउँमा गरेका कारण अनेक झन्झट बेहोर्नु परिरहेको छ । विभागले गलत नियतका साथ मजदूरलाई प्रलोभनमा पारी फर्म दर्ता गर्ने केही व्यवसायीविरुद्ध मुद्दासमेत दर्ता गरेको छ ।
तपाईंलाई रोजगारी दिने शर्तमा कसैले करको दायित्वसमेत थोपरिरहेको त छैन? रोजगारदाताले तपाईंको कागजात दुरुपयोग गरिरहेको त छैन? कागजात लिँदा कुन उदेश्यले लिएको छ? यसबारेमा समयमै सचेत हुनु जरुरी छ ।
पीपीएलको खेल तालिका सार्वजनिक
२ अर्ब जोगाउने नारा लगाउँदै निगमले गर्‍यो ६८ करोड मस्ती
नेपालका विभिन्न बैंकको साढे १४ करोड जोखिममा
पुलको नाममा पप्पुको दादागिरी : ३ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने पुल छेउ न टुप्पो
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित
नेताले बालुवाटार बेचे : माफियाले सिंगो गाउँ !
‘प्रेस युनियनको महाधिवेशन गर्न नसक्नु हाम्रो विवेकपूर्ण अपरिहार्य वाध्यता हो’
अमेरिकी राजदूत बेरीले योमरी खाँएको तस्वीर सेयर गर्दै लेखे यस्तो स्ट्याटस